2 Zvino mumwedzi waNisani,+ mugore rechimakumi maviri+ ramambo Atashasta,+ waini yakanga iri pamberi pake, uye ini senguva dzose ndakatora waini ndikaipa mambo.+ Asi ndakanga ndisati ndambosuruvara pamberi pake.+ 2 Naizvozvo mambo akati kwandiri: “Nei chiso chako chakasuruvara+ iwe usingarwari? Ichi hachisi chimwe chinhu kunze kwokusuruvara kwomwoyo.”+ Ndakatya kwazvo. 3 Ndakabva ndati kuna mambo: “Mambo ngaararame nokusingagumi!+ Chiso changu chingaregererei kusuruvara kana guta,+ iyo imba yenzvimbo yemakuva emadzitateguru angu,+ rakaparara, uye magedhi aro akatsva nomoto?”+ 4 Mambo akatiwo kwandiri: “Chii ichi chauri kuedza kukumbira?”+ Ndakabva ndanyengetera+ kuna Mwari wokumatenga.+ 5 Pashure paizvozvo ndakati kuna mambo: “Kana zvakanaka kuna mambo,+ uye kana mushumiri wenyu akanaka pamberi penyu,+ nditumei kuJudha, kuguta renzvimbo yemakuva emadzitateguru angu, kuti ndirivakezve.”+ 6 Mambo akati kwandiri, vahosi vake zvavakanga vagere pedyo naye: “Rwendo rwako ruchatora nguva yakareba sei uye uchadzoka rini?” Naizvozvo zvakava zvakanaka+ pamberi pamambo kuti andirege ndichienda, pandakamupa nguva yakatarwa.+ 7 Zvino ndakati kuna mambo: “Kana zvakanaka kuna mambo, dai ndapiwawo tsamba+ dzinoenda kumagavhuna+ ari mhiri kwoRwizi,+ kuti andibvumire kupfuura kusvikira ndasvika kuJudha; 8 uyewo tsamba inoenda kuna Asafi muchengeti wepaki yamambo, kuti andipe miti yokuti ndivake magedhi eNhare+ yeimba+ nematanda, uye orusvingo+ rweguta neeimba yandichanopinda.” Naizvozvo mambo akandipa, maererano noruoko rwakanaka rwaMwari wangu rwaiva pandiri.+ 9 Ndakazosvika kumagavhuna+ aiva mhiri kwoRwizi ndikaapa tsamba dzamambo. Uyewo, mambo akandirega ndichienda nevakuru veuto rehondo nevatasvi vemabhiza. 10 Sanibharati+ muHoroni+ naTobhiya+ mushandi wacho, muAmoni,+ pavakazvinzwa, kwavari zvakava chinhu chakaipa kwazvo+ kuti mumwe munhu akanga auya kuzotsvakira vanakomana vaIsraeri chinhu chakanaka. 11 Ndakazosvika kuJerusarema, ndikaramba ndiriko kwemazuva matatu. 12 Ndakabva ndamuka usiku, ini nevarume vashomanana vandaiva navo, asi handina kuudza munhu+ zvakanga zvichiiswa mumwoyo mangu naMwari wangu kuti ndiitire Jerusarema,+ uye ndakanga ndisina chipfuwo chandaiva nacho kunze kwechipfuwo chandakanga ndakatasva. 13 Ndakabuda nepaGedhi roMupata+ usiku nepamberi peChitubu cheNyoka Huru nokuGedhi reMirwi yeMadota,+ uye ndakaramba ndichiongorora masvingo+ eJerusarema, kuti akanga akaputsika sei uye kuti magedhi+ aro akanga atsva sei nomoto. 14 Ndakapfuurira kuGedhi reTsime+ nokuDziva raMambo, uye pakanga pasina nzvimbo yokuti chipfuwo chandakanga ndakatasva chipfuure napo. 15 Asi ndakaramba ndichikwira nomumupata une rukova+ usiku, uye ndakaramba ndichiongorora rusvingo; ndichibva ndazodzoka ndikapinda nepaGedhi roMupata,+ ndikadzoka saizvozvo. 16 Asi vatevedzeri vevatongi+ havana kuziva kwandakanga ndaenda nezvandaiita; uye ndakanga ndisati ndataura chinhu kuvaJudha nevapristi nevanokudzwa nevatevedzeri vevatongi nevamwe vanhu vose vaiita basa. 17 Ndakazoti kwavari: “Muri kuona kutambudzika kwatiri kuita, kuti Jerusarema rakaparara sei uye kuti magedhi aro akatsva sei nomoto. Uyai ngativakeizve rusvingo rweJerusarema, kuti tirege kuramba tichizvidzwa.”+ 18 Ndakavaudza nezvoruoko+ rwaMwari wangu, kuti rwakanga rwakanaka sei pandiri,+ uyewo nezvemashoko amambo+ aakanga anditaurira. Ivo vakati: “Ngatisimukei tivake.” Naizvozvo vakasimbisa maoko avo kuti vaite basa rakanaka.+ 19 Zvino Sanibharati+ muHoroni naTobhiya+ mushandi+ wacho, muAmoni,+ naGeshemu+ muArabhiya+ pavakazvinzwa, vakatanga kutinyomba+ uye kutitarira vachitizvidza vachiti: “Chii ichi chamuri kuita? Muri kupandukira mambo nhai?”+ 20 Zvisinei, ndakavapindura ndikati kwavari: “Mwari wokumatenga+ Ndiye achaita kuti tibudirire,+ uye isu, vashumiri vake, tichasimuka, uye tichavaka; asi imi hamuna mugove,+ kana chamunoti ndechenyu, kana chiyeuchidzo+ muJerusarema.”